Igbo, John: Lesson 065 - Jizọs osiputara onwe ya dika Okpara Chineke nye onye aru gwuru (Jọn 9:35-41) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 065 (Jesus reveals himself to the healed one)
c) Jizọs osiputara onwe ya dika Okpara Chineke nye onye aru gwuru (Jọn 9:35-41)
35 Jizọs nụrụ na ha achụpụwo ya. Mgbe ọ hụrụ ya, ọ sịrị: "Ị kwenyere n'Ọkpara Chineke?" 36 O wee zaa, sị: "Ònye ka ọ bụ, Onyenwe anyị, ka m wee kwere na ya?" 37 Jizọs sịrị: si, I huwo Ya, Ya onwe-ya bu kwa onye nāgwa gi okwu. 38 O we si, Onye-nwe-ayi, ekwem: o we kpọ isi ala nye Ya.
Anyị agụọ akụkọ nkasi obi a. Mgbe Jizọs nụrụ banyere nwoke ahụ a gwọrọ Ịchụpụ, ọ chọrọ ka ha wee hụ ya na ya na-ata ahụhụ. Nke a bụ nkasi obi nke onye kwere ekwe ọ bụla nke e kewapụrụ site na ezinụlọ na ndị enyi n'ihi Kraist. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ a anyị na-emesi gị obi ike na Jizọs ga-anụ mkpu gị ma bịakwute gị n'onwe gị ma ọ gaghị ahapụ gị. Elela ndi mmadu anya ma obu na i ga-emechu ihu. Gaa naanị Jizọs. I nweghị olileanya n'elu ụwa ma ọ bụ n'eluigwe ma n'ime ya. Ọ hụrụ gị n'anya.
Mgbe ahụ Jizọs jụrụ nwa okorobịa ahụ ajụjụ dị oké mkpa, "Ì kwere na Ọkpara Chineke, ònye bụkwa Nwa nke mmadụ?" Nke a na-egosi na Jizọs maara na nwa okorobịa ahụ maara akụkụ ụfọdụ nke agba ochie, ma mara site na Danieel 7: 13-14, na Nwa nke mmadụ bụ Onyeikpe nke Ụwa na Ọkpara Chineke. Jizọs na-arịọ nke a iji chọpụta ma nwa okorobịa ahụ ọ chọrọ inyefe n'ebube nke Ọkpara Chineke maka oge na mgbe ebighi ebi ma ghara ịla azụ. O chere na Jisos abugh madu efu, ma gwa ya dika "Onye nwe ayi." Ma o choro imata ihe banyere onye bu Okpara Chineke, ka o ghara ife madu efu - nke gabu ikpere arusi.
Mgbe nke a gasịrị, Jisos nyere ya azịza dị ebube, "Ị hụkwara ya ụzọ site n'okwukwe, tupu ị hụ ya na anya, Abụ m Ya, Ọkpara Chineke na-agwa gị okwu." Ọ dịghị oge ọ bụla nwa okorobịa a ga-enyefe onwe ya kpamkpam nye Jizọs. O wee kpọọ isiala n'ihu ya, dị ka a ga-asị, "Onyenwe anyị, abụ m nke gị, ị bụkwa eze m, nna m ukwu na Onyenwe anyị. Nwanna, ì ghọtawo Jizọs, Ọkpara Chineke, n'ụdị mmadụ? Ị soro ya dịka onye kwere ekwe? Ị na-efe ya ofufe dị ka orù?
39 Jizọs kwuru, sị, "Abịara m n'ụwa maka ikpe, ka ndị na-adịghị ahụ hụ wee hụ; ka ndi nāhu uzọ we ghọ ndi-ìsì. 40 Ndi-Farisi ndi ya na ha nọ we nu ihe ndia, si ya, Àyi onwe-ayi bu kwa ndi-ìsì? 41 Jisus si ha, Ọ buru na unu kpuru ìsì, ọ dịghị mmehie; ma ugbu a ị na-asị, 'Anyị na-ahụ' ya mere mmehie gị ka dị.
Mgbe nwa okorobịa ahụ kpọọrọ isiala n'ihu Jizọs, ọ dịghị egbochi ya ime otú ahụ n'ihi na Jizọs kwesịrị nsọpụrụ nile.Ma Jizọs kwuru na ọbịbịa ya ga-eweta ikpe nye ndị mpako na ndị nsọ dị iche iche bụ ndị chere onwe ha ka ha ghọta ihe, ma ha amaghị eziokwu. Ndị ìsì na ndị mmehie ghọtara nke a ma chegharịa ma kwatuo ndị na-akwa iko. Jizọs ekpeghị ikpe Jizos onye náechègharighi ikpe; ha kpebiri n'onwe ha maka ịjụ nzọpụta ya. Ha anatawo ìhè n'oge gara aga site n'ọnụ ndị amụma na ihe àmà nke Akwụkwọ Nsọ, ma ọ bụrụ na ha ama ụma megide ikwusa ozi ọma Jizọs, ha ga-efunahụ ìhè nke dịnụ. Ha ga-abụ ndị kpuru ìsì, ndị obi siri ike, ndị isi ike na ndị na-akpọ asị. Ọbịbịa Kraist na ozi ọma ya nwere ihe abụọ: Nzọpụta ma ọ bụ nhụjuanya, ngọzi ma ọ bụ nkọcha. Kedu ihe si na ya pụta n'obi gị?
Ndị Farisii nọ na ndị na-ege ntị na Kraịst bụ ndị chere na Jizọs ji okwu ya na-ama ha. Ha jụrụ, "Anyị kpuru ìsì?" Jisos kuru iru ugha nke ha, si, "oburu na unu huru na unu bu ndi kpuru ìsì ma kwa iru uju n 'ime nke ime mmuo unu, unu agaghariri na nmehie unu tupu John Baptist, ma rapupu nmehie unu, mgbe ahu agara nata mgbaghara na ngozi. , na-ekwu na ị ghọtara ihe niile, na-eche na ị bụ onye ezi omume, ma na ịnya isi dị otú a, ị na-eme ka ị kpuo ìsì na ike gị.
EKPERE: Onyenwe anyị Jisos, ị bụ Ọkpara Chineke n'ụdị mmadụ. Anyị na-efe gị ma nyefee gị ugbu a na ruo mgbe ebighị ebi. Anyị nwere ike gị na ike anyị na ihe onwunwe anyị. Anyị na-arịọ gị ka ị gbaghara ma mee ka obi anyị dị ọcha ka mmehie ọ bụla wee dị iche, nwere ike kewapụ anyị n'ebe ị nọ.
Page last modified on March 05, 2020, at 06:18 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)